Izay liana amin'ny manidina amin'ny serivisy mampiasa JoinFS sy LOTS of AI ???
fanontaniana Izay liana amin'ny manidina amin'ny serivisy mampiasa JoinFS sy LOTS of AI ???
9 volana 4 herinandro lasa izay #900 by fltbuff71
Jereo ny tranokala fsxflywithmanyai.weebly.com amin'ny antsipiriany
Hanangana zana-tarika tarika amin'ny hoavy raha toa ka liana ny fahalianana.
Mampiasa Rikooo rindrambaiko ho an'ny entana 737 sy 747 aho
Tsy afaka manidina AI amin'ny multiplayer amin'ny Dingana Steam, fa JoinFS dia tsara ary afaka manidina ny Steam, Box, na Flight Sim hafa amin'ny zotram-pifidianana malalaka.
Tsy hampiasa ny TeamSpeak aho ary sahala amin'ny hoe miampita amin'ny seriver izy ireo izao.
Raha liana liana dia ampahafantaro ahy fotsiny
Jereo ny pics mifatotra amiko amin'ny fisiahana amin'ny Ai Flight Planner. my server, and JoinFS
8 volana 4 herinandro lasa izay #996 by fltbuff71
Mampiditra DISCORD aho
mikatsaka ny tombontsoa rehetra amin'ny fidirana amiko ato amin'ity seriver ity amin'ny march 2018 vondrona iray, miaraka amin'ny fiaramanidina maro, ianao ary mampiasa DISCORD ???????
8 volana 3 herinandro lasa izay #1003 by fltbuff71
8 volana 3 herinandro lasa izay #1007 by fltbuff71
Fotoana mamorona pejy: 1.614 segondra